'UFARGO' IXESHA LE-4, ENEENKWENKWEZI UCHRIS ROCK, UFUMANA I-PREMIERE YE-27 SEPTEMBA YE-FX - IINDABA
'UFargo' Ixesha le-4, eneenkwenkwezi uChris Rock, ufumana i-premiere ye-27 Septemba ye-FX
Ufakelo lwesine oluzayo lweqoqo lika-Noah Hawley's FX ingqokelela ye-anthology Fargo, ekhokelwa nguChris Rock, iya kuqala ngo-Septemba 27 ngeziqendu zayo zokuqala ezimbini, ezikhokelwa ngu-Hawley, zibuyela umva.
Ekuqaleni kwakucwangciselwe ukuqala ngo-Epreli 19, ixesha lesine likaFargo lalibaziseka ngubhubhane we-coronavirus, owavala ukuveliswa komboniso phakathi ku-Matshi. Ingqokelela ngoku ikwimveliso yaphambi kwexesha eChicago, kunye nokufota kwiqendu ezimbalwa eziseleyo ze-11-isiqendu sesine sokufakwa esiza kuhlaziywa ngasekupheleni kuka-Agasti.
Ukulandela inkulumbuso yeeyure ezimbini, uFargo uzakusasaza isiqendu esinye veki nganye, esinokuthi sifumaneke ngosuku olulandelayo kwiFX eHulu.
Happy new year kwiPolish eguqulweyo
Umyili we-Fargo kunye nomvelisi karhulumente u-Hawley kunye nenkampani yakhe yokuvelisa, ii-26 Keys, zikhokelela kubasebenzi abatsha bezavenge zintsha kraca. UWarren Littlefield kunye nomzi mveliso wakhe, iNkampani iLittlefield, ikwangumlimi karhulumente kunye noJoel & Ethan Coen. UFargo uveliswa yi-MGM Television kunye ne-FX Productions, kunye ne-MGM Television ekhonza ngenxa yokuba istudiyo esikhokelayo kunye nomhambisi wehlabathi.
Ukujoyina i-Rock ngaphakathi komdibaniso oqinileyo weSizini yesine nguJason Schwartzman, uSalvatore Esposito, uBen Whishaw, uJessie Buckley, uJack Huston, uEmri Crutchfield, Andrew Bird, Anji White, Gaetano Bruno, Sean Fortunato, Jeremie Harris, Corey Hendrix, Matthew Elam , UJames Vincent Meredith, uFrancesco Acquaroli, uKaren Aldridge, uKelsey Asbille, uRodney Jones, uJameson Braccioforte, uTommaso Ragno, uGlynn Turman noTimothy Olyphant.
Iveki yokugqibela yeRock yahlekisa ngenkulumbuso ye-premiere ezayo ye-premiere nge-teaser trailer:
Nantsi inkcazo enzulu yenkcazo yebali leXesha lesi-4.
boss baby ending wachaza
Ngo-1950 kwisiXeko saseKansas, amaqela amabini ejele athintela iphupha laseMelika abetha uxolo. Ngokudibeneyo, balawula enye inkqubo yoqoqosho yokuxhaphaza, ukumilisela kunye namayeza. Ukuqinisa isimangalo sabo, uLoy Cannon (uChris Rock), ophambili kwikhaya lolwaphulo-mthetho e-Afrika, uthengisa unyana wakhe omncinci uSatchel (uRodney Jones), kutshaba lwakhe uDonatello Fadda (Tommaso Ragno), umphezulu we-mafia yase-Italiya. Ukubuya kwakhe, uDonatello unikezela unyana wakhe omncinci uZero (uJameson Braccioforte) kuLoy.
Xa uDonatello esweleka esibhedlele kulandela inkqubo yesiqhelo yotyando, isoyikiso esinamandla siyasongelwa. UJosto Fadda (Jason Schwartzman) uthatha isambatho sikayise, nangona kunjalo iinzame zakhe zokuzinzisa eli qela zithotywa ngumntakwabo, uGaetano (uSalvatore Esposito), oye wajoyina umzi eKansas City emva kokwakha igama elalikhohlakele e-Itali. Amadoda ahlukeneyo e-Fadda -kunye no-Ebal Violante (Francesco Acquaroli), uConstant Calamita (Gaetano Bruno) kunye no-Antoon Dumini (Sean Fortunato) -bamele ukumisela indawo abathembekileyo kuyo. Phakathi kwesiphithiphithi, uPatrick Rabbi Milligan (uBen Whishaw), umntu othe wangcatsha isangqa sezihlobo zakhe ukuze akhonze ama-Italiya, ubukele ngokukhawuleza ukuqinisekisa ukuba uyaphila.
Eqonda ukuba kunokwenzeka, uLoy ujonga iFaddas kwindawo engenamandla, ehambisa umcebisi wakhe othembekileyo, uGqirha Senator (Glynn Turman), kunye noo-lieutenants, uLeon Bittle (Jeremie Harris), u-Omie Sparkman (Corey Hendrix) no-Opal Rackley (James Vincent Meredith) ukwenza ukuthanda kwakhe. Nangona kunjalo, okothusayo uLoy, unyana wakhe omkhulu uLemuel Cannon (Matthew Elam) akafuni ukuba yinxalenye yeshishini lekhaya.
Ukudityaniswa kweli bali lokufudukela kwelinye ilizwe, ukumanyana kunye namandla, ziintsomi zikaEthelrida Pearl Smutny (uE'myri Crutchfield), intombi eneminyaka eli-16 ubudala kaThurman (Andrew Bird) noDibrell Smutny (Anji White), isibini esitshatileyo abangabanini babo oovimba abagcina izidumbu; U-Marshal Dick Deafy Wickware wase-US (uTimoti Olyphant), igqwetha lama-Mormon; Umcuphi u-Odis Weff (uJack Huston), ipolisa lesiXeko saseKansas elaziwayo ngenxa yeetics zakhe ezinyanzelekileyo; kunye no-Oraetta Mayflower (uJessie Buckley), umongikazi ongakwaziyo ukuhlala nabanye abantu besokola.
Iibhasikiti zexesha loku-1 lokusasaza
Inkwenkwezi yeFargo uChris RockUMatthias Clamer / FX
Imvelaphi 'UFargo' Ixesha le-4, eneenkwenkwezi uChris Rock, ufumana i-premiere ye-27 Septemba ye-FX
Ngubani igama lokwenyani lika-shania twain
inde kangakanani i-greekgodx
Ngaba ii-starbucks zivuliwe ngemini yesikhumbuzo
Umzi wesixeko somtsalane netflix